XFCE 4.8 misy! | Avy amin'ny Linux
XFCE 4.8 misy!
XFCE 4.8 dia azo alaina amin'ny 17 Janoary ary ankehitriny ny fonosana voalohany dia miseho amin'ny fametrahana ao amin'ny Ubuntu, Debian ary ny disko hafa. Ity kinova ity dia tsy nitondra na inona na inona ary tsy latsaky ny 2 taona vao nivoaka, fa ilaina ny maka tsiro kely.
1 Inona ny vaovao
Thunar, mpikaroka rakitrao, izay nohavaozina sy navaozina indray. Ny safidiny mahavita manampy plugins dia ahafahantsika manome azy io miaraka amina endri-javatra tena mandroso toy ny fanovana anarana ny filefa be dia be (mitovy amin'ny PyRenamer) avy amin'ilay mpanondrana azy.
Iray amin'ireo fampidirana tena manan-danja amin'ity kinova ity ny PoliciKit (User Security Layer) sy ConsoleKit (User Control Layer).
Adikao / apetaho ny vondrona asa,
Fanohanana ireo rafitra GVFS (rafitra rakitra virtoaly) vaovao.
I Thunar izao dia mamela ny fivezivezena ahazoana aina kokoa amin'ny alàlan'ny lahatahiry ifampizarana lavitra (FTP, Windows, WebDAV, mpizara SSH ...), ary misy boaty fifanakalozan-kevitra feno kokoa koa (ho an'ny fakana tahiry maromaro miaraka, ohatra).
Ny tontonana Xfce dia naverina nosoratana indray, nohatsaraina ny toerany sy ny habeny, azo atao tsara ny manao azy mangarahara, ary koa mamela anao hanamboatra haingana ireo singa ananantsika ao amin'ilay tontonana ireo ny mpamoaka lahatsoratra.
Izy io dia efa azo apetraka avy amin'ny PPA XFCE 4.8 ao amin'ny Ubuntu Lucid sy Maverick. Mila mihazakazaka ao amin'ny terminal fotsiny isika:
Para Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (32bit fotsiny!):
sudo add-apt-repository ppa: alexx2000 / xfce
sudo apt-mahazo mametraka xubuntu-desktop
Para Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat (32bit sy 64bit):
sudo add-apt-repository ppa: koshi / xfce-4.8
Raha mampiasa ianao Fitsapana i Debian, azonao atao ny mametraka ity tsipika manaraka ity ao amin'ny source.list:
En andohalambo sy distros famoahana hafa mihodina, mitovy amin'ny mahazatra foana izy: miandry ny fanavaozana ny tahiry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » XFCE 4.8 misy!
Antonio Quinonez dia hoy izy:
fanontaniana iray tokony esoriko ny xfce 4.6
Valiny tamin'i Antonio Quiñonez
Ataoko angamba fa tsy izany. 🙂
Indiocabreao dia hoy izy:
Ao amin'ny Arch sy distros famotsorana hafa, dia zavatra taloha ihany io: andraso ny fanavaozan'ny repositories.
Ao amin'ny Arch dia misy 4.8 saika hatramin'ny nanambarana azy 😛
Mamaly an'i Indiocabreao
Izay no antony ... efa nanavao ny trano fitahirizana izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia mitranga izany alohan'ny hisehoan'ny PPA Ubuntu. 🙂
Luis Mauro Martinez Baez dia hoy izy:
Inona ny lohahevitra?
Valiny tamin'i Luis Mauro Martinez Baez
Novonoinao aho. Ny marina dia tsy tadidiko. 🙁
USB Hard Drive ivelany 3.0
Bangarang 2.0 misy!